VaTrump Vanonzi Vane Rutsigiro Rwakawanda Mudunhu reOklahoma
Vanhu vanopfuura makumi manomwe nemaviri emamirioni vakatovhota muAmerica.
America yasarirwa nemazuva mashanu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Sarudzo ichaitwa svondo rinouya, musi wa 3 Mbudzi. Nhasi tinoenderera mberi tichitaura nezvizvarwa zve Zimbabwe zvinogara muAmerica kuti tinzwe maonero avanoita sarudzo idzi.
Parizvino vanhu vanopfuura mamirioni makumi manomwe nemaviri vatovhota musarudzo idzi. Zviri kutarisirwa kuti panosvika zuva rekuvhota nemusi weChipiri svondo rinouya, zana remamirioni evanhu rinenge ravhota.Izvi zvinonzi hazvisati zvamboitika kuchinzi zviri kukonzerwa nechido chevanhu kuti vavhote nekuti vanoda kuti manzwi avo anzwikwe.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu re Oklahoma, Tafadzwa Munjanja, chinoti zvinoita sekuti vachena vazhinji mudunhu iri vanotsigira VaTrump asi vachiti VaJoe Biden vakasimbavo zvikuru zvekuti vanogona kukunda mudunhu iri.
VaMunjanja vanoti pane mamwezve mapato asinganyanyi kuzikanwa ari kukwikwidzavo, anosanganisira reavo vakazvimirira, vakaita se muimbi ane mukurumbira, Kanye West.
Mbudzi 24, 2020
Chimwe Chizvarwa cheZimbabwe Chechidiki Chinogara muAmerica Chowana Rubatsiro Rwekushanda Nevanotambura KuChimanimani
Zvinhu Zvoramba Zvakaita Manyama Amire neRongo muAmerica
Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo muAmerica zvichitevera kutsika madziro kuri kuita mutungamiri wenyika iyi, VaDonald Trump, avo vari kuramba kutambira kuti VaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika, muzvinafundo Doctor Moses Rumano, vanoti zviri kuitika izvi zvinoita kuti america ishaye rukodzo pasi rose.
VaRumano vanoti vanoona zvichigadzirisika musi wekugadzwa kwaVaBiden usati wasvika sezvo America iine mitemo inokwanisa kushandiswa kuitira kuti masimba atambidzwane zviri pamutemo.
"Kunyange hazvo tiri kuwona vaviri ava vachitatsura panyaya yekutambidzanwa kwemasimba bumbiro remitemo emuno muAmerica ndiro richashandiswa sezvo muno mune hutongi hwejechetere zvinoita kuti VaJoe Biden vagadzwe musi wa Ndira 20, gore rinouya pasina dambudziko," Doctor Rumano vadaro.
Mbudzi 19, 2020
Kutambidzana kweMasimba Konetsa muAmerica
Trump Biden Mask
Nyanzvi munyaya dzezvehutano dzinoti kusatambidzanwa kwemasimba nechimbi chimbi kuri kuitika muAmerica pakati pemutungamiri wenyika pari zvino, VaDonald Trump ve Republican Party, pamwe nevakasarudzwa semutungamiri mutsva, VaJoe Biden veDemocratic Party, kuri kushamisa veruzhinji pasi rose.
Nyanzvi idzi dzinotiwo kushaikwa kwemushandira pamwe uku kunokwanisa kuwedzera kwehundu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika iyi sezvo pasina hurongwa hwakajeka pakutambidzanwa kwemasimba.
Hurumende yaVaTrump haisati yatambira zviri pamutemo kuti Va Biden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, uye ivo VaTrump pachavo, vakatokwidza mumatare kupikisa kwavo zviri kubuda mumavhoti ari kuverengwa mumatunhu akasiyana siyana vachiti zvinhu hazvina kufambiswa negwara rinotarisirwa.
Gakava rekutambidzana masimba iri riri kuitika panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 hwuri kuramba huchikwira muAmerica.
Kunyange hazvo VaBiden vakatodoma chikwata chavo chiri kufambisa nyaya dze Covid-19, dambudziko riripo nderekuti chikwata chaVa Biden ichi, chinofanirwa kupangana mazano nevakuru vakuru vezvehutano muhurumende ye America, izvo zvisati zvaitika sezvo bazi re General Services Administration risati ratambidza chikwata chaVa Biden svumbunuro dzekushandisa mahofisi ehurumende, pamwe nekupihwa mari inosvika mamiriyoni gumi emadhora.
VaBiden vanofanirwa kudoma vanhu vanosvika zviuru zvina vachange vachitungamira mapazi ehurumende pamwe nekuva nezvinzvimbo zvepamusoro soro.
Pavanhu ava, chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu, vanhu vanofanirwa kutambirwa nedare re Senate kuti vatore zvigaro zvepamusoro muhurumende.
VaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko yekuva mutungamiri mutsva musi wa Ndira 20, 2021.
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano pamwe nezvematongerwo enyika, Dr Simbiso Ranga, vanoti kunonoka kutambidzana masimba kuri kuitika kuchaita kuti dambidzo reCovid-19 riremera America zvikuru.
VaBiden Voenderera Mberi Vachiumba Hurumende Yavo Zvisineyi Kuti VaTrump Vari Kuramba Kutambidzana Masimba
Panguva iyo mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musarudzo dzichangobva kuitwa muAmerica, vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika, VaJoe Biden vebato reDemocratic Party vari kuenderera mberi nekuita hurongwa hwegadziriro yehurumende yavo kuburikidza nemisangano yakasiyanasiyana.
Nemusi weChipiri VaBiden vakasangana nenyanzvi dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, nyanzvi dzezvekusora pamwe nenyanzvi dzezvekudzivirirwa kwenyika.
Nemusi weChitatu, VaBiden vakaita musangano wepadandemutande nevashandi vezvehutano vari kushanda vari pamberi mukurwisana nedenda rarura muAmerica pamwe nepasi rose reCovid-19.
Asi zvose izvi zvichiitika, VaTrump havana kupeta maoko kwete. VaTrump vari kuramba vachitevera nyaya dzekupikisa kwavo kukunda kwaVaBiden kuburikidza nematare edzimhosva, asi vanonzi vari kusangana nezvimhamipinyi kumatare zvichitevera kuraswa kwakaitwa imwe yenyaya dzavo kudare rekuPennsylvania uko vaiedza kumisa kudomwa kwaVaBiden.
Chikwata chaVaTrump chakazivisawo kuti chiri kupikisawo kukunda kwaVaBiden kudunu reNevada, pamusoro pedzimwe nyaya dziri mumatare emamwe matunhu, izvo zviri kunzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika hazvina zvikuru zvazvichashandura.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika uye chichiita zvidzidzo zvematongerwo enyika paGeorge Mason University muVirginia kuno muAmerica, uye ari munyori wemabhuku, Pearl Matibe, anoti vanhu vanofanirwa kupa mukana kuhurongwa huri kuitika hunosanganisira kuverengwa kwemavhoti zvakare mune mamwe matunhu nezvichabuda kumatare kunyaya dzaVaTrump vasati vatanga kuti zviri kunonoka.
Ngatinzweyi vachitsanangura muhurukuro yaaita naJonga Kandemiiri weStudio 7.
Hurukuro naMuzvare Pearl Matibe
Vatsigiri vaVaTrump Vanoratidzira muWashington DC
2020 Election Protests Washington
Vanhu vari kutsigira mutungamiri we America, VaDonald Trump, mumashoko avo asina huchapupu ekuti sarudzo dzemuAmerica dzakabiridzirwa, vaswera vaine hurongwa hwekuratidzira munzvimbo dzakasiyana siyana muguta guru reWashington mudunhu re District of Columbia.
Makungano ekuratidzira aya anga akarongwa muguta rose reWashington, vamwe vachiratidzira pasi pehurongwa hwemasangano anoti; Million MAGA March, Women for Trump, uye ne Stop the Steal.
Vari kutungamirwa hurongwa hwakasiyana siyana uhu, vari kuburitsa mashoko asina humbowo mukati pamwe nechokwadi chizere achiti sarudzo yemutungamiri wenyika, yakabiridzirwa zvemhando yepamusoro soro, nokudaro inofanirwa kudzivirirwa zvakasimba.
VaTrump vari kuramba kutambira kuti vakakundwa nevaimbove mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, avo vakanzi nemasangano enhau, kusanganisira Fox News yagara ichitsigira VaTrump, ndivo vakakunda musarudzo iyi.
VaTrump vari kuti pane zvakaitwa mumamwe matunhu zvinotyora mitemo yesarudzo, kunyange hazvo pasina vakuru vakuru vematanhu vati vazivisa kutyorwa kwekadzama kwemitemo yesarudzo, kunze kwedunhu reGeorgia riri kuverenga zvakare mavhoti sezvo mitemo yedunhu iri, ichisungira kuti kuverengwa kwemavhoti kudzokororwe kana paita mutsauko wemavhoti ari pasi pe 0.05% pavanhu vari kukwikwidzana.
Georgia inonzi ine vanhu mamiriyoni mashanu vakavhota uye mutsvauko uripo une vanhu zviuru gumi nezvina, 14,000 votes vakavhotera VaBiden pamusoro pevanhu vakavhotera VaTrump.
Izvi zvinosiya pane mutsauko we 0.03%, uyo uri pasi pe 0.05%.
Maawa maviri kuratidzira kwekutsigira VaTrump kusati kwatanga, VaTrump vaonekwa vari mumotokari dzavo dzakaita mudungwe dzichipfuura nemumugwagwa, Pennsylvania Avenue, vachinyemwerera pamwe nekusimudzira vanhu maoko avo sechiratidzo chekufarira zviri kuitwa nevanhu ava.
VaTrump vapfuura nemu Freedom Plaza vachienda kunotamba gorufu mudunhu rine muganhu ne District of Columbia, reVirginia.
Vatsigiri vaVaBiden, avo vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri weAmerica wechimakumi mana nematanhatu, vanga vari muWashington DC zvakare vachiratidzirawo kutsigira kwavo VaBiden.
Vatsigiri ava vanga vakaungana paBlack Lives Matter vaine zvinyorwa zvakanzi Biden Won.
Kunyange hazvo hurumemende isati yatambira kukunda kwaVaBiden, mugari wekuDelaware uyu ari kutoronga hurumende yake itsva, uye akadoma vanhu mazana mashanu vachange vachifambisa basa rekutambidzana masimba.
Asi bazi rehurumende rakakosha, reGeneral Services Administration, harisati ratambira kukunda kwaVaBiden, izvo zviri kuripa kuti risape chikwata chaVaBiden svumbunuro dzekushandisa mahofisi ehurumende pamwe nemari inoita $9,9 million inofanirwa kupihwa VaBiden kuti vashandise mukugadzirira hurumende yavo.
Chikwata chaVaBiden chine mutoro mukuru wekuona kuti chabuda nemazita evanhu vanosvika zviuru zvinomwe vachange vachitungamira mapazi akasiyana siyana ehurumende pamwe nekuva vakuru vatsva muzvinzvimbo zvakawnda muhurumende.
Pavanhu ava, vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu vanofanirwa kutambirwa nedare reSenate mushure mekunge vaongororwa kuti vanokodzera here kuva vashandi vakuru muhurumende.
Kuongororwa kwenhoroondo dzavo kunoda mari yakawanda zvikuru.
Kunyange hazvo vasati vapihwa rubatsiro nehurumende, VaBiden vanokwanisa kushandisa imwe yemari yavakapihwa yekuti vashandise muhurongwa hwavo hwekuti vasarudzwe semutungamiri wenyika.
Mari iyi inopihwa vose vanenge vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, kunyange hazvo mapato avo achizvitsavagirawo ega mari idzi.
Kunonoka kutambidzwana kwemasimba muAmerica kwakaitikawo muna 2000 zvichitevera danho rakatorwa nevaimbove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica, VaAl Gore, rekupikisa zvakabuda musarudzo dzemu Florida.
Asi dare repamusoro soro rakabuda nemutongo wekatambira kuti VaBush ndivo vakanga vakunga musarudzo yemutungamiri wenyika.